Salamo faha-152 hatramin'ny faha-155 - Wikipedia
Salamo faha-152 hatramin'ny faha-155
Ny Salamo faha-152 hatramin'ny 155 dia salamo lazaina fa nosoratan' i Davida izay tsy hita ao amin' ny Bokin' ny Salamo araka ny kanônan' ny jodaisma. Hita ao amin' ny Baiboly amin' ny teny siriaka atao hoe Peshitta ireo salamo ireo, miaraka amin' ny salamo faha-151 izay tsy hita koa ao amin' ny Bokin' ny Salamo. Nifanarahana fotsiny ny fanasiana laharana 151 hatramin' ny 155. Ny salamo faha-151 kosa dia tsy hita ao Bokin' ny Salamo araka ny ahafantarana azy ao amin' ny Baiboly hebreo sy ny Baibolin' ny ankamaroan' ny fivavahana kristiana (katôlika, prôtestanta sns.). Ao amin' ny Baiboly jiosy amin' ny teny grika atao hoe Septoajinta (na Septanta) no ahitana azy.
Ao amin' ny fiangonana kristiana ankehitriny dia heverina ho kanônika (filamatra) na tsy kanônika (ao amin' ny Fiangonana ôrtôdôksa sasany) na pseodepigrafa na apôkrifa (ao amin' ny Fiangonana katôlika sy Fiangonana prôtestanta ary Fiangonana evanjelika) ireo salamo ireo. Ny Fiangonana apôstôlika armeniana dia mamaky ny salamo faha-151 ao amin' ny litorjiany isaky ny andro Pentekôsta, ary ny Fiangonana etiôpiana ôrtôdôksa sy ny Fiangonana eritreana ôrtôdôksa dia mampiasa azy ao amin' ny litorjiany amin' ny alin' ny Zoma masina.
"Notaon' i Davida raha nifanandrina tamin' ny liona sy ny lopa izay naka ny ondry tamin' ireo nandrasany izy". Amin' ny fiteny siriaka no ananana io salamo io amin' izao ary mety ho nosoratana tamin' ny teny hebreo izy tamin' ny voalohany ary mety tamin' ny vanimpotoana helenistika (taona 323 hatramin' ny 31 tal. J.K.) no nanoratana azy.
Ity salamo ity, izay misy amin' ny teny siriaka, dia hita tao amin' ny horonan-tsoratra tao amin' ny Ranomasina Maty. Sora-tanana natao tamin' ny taonjato voalohany taor. J.K. izy io. Mitovy lohahevitra amin' ny salamo faha-22 izy. Sarotra anefa ny mamantatrany fotoana mety nanoratata azy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Salamo_faha-152_hatramin%27ny_faha-155&oldid=1010900"
Dernière modification le 16 Aprily 2021, à 11:03
Voaova farany tamin'ny 16 Aprily 2021 amin'ny 11:03 ity pejy ity.